Raha tsiahivina, nisy disadisa teo amin’ilay lehilahy sy ny vadiny tamin’io andro io. Araka ny feo azon’ilay lehilahy mantsy dia mampirafy azy ny vadiny. Efa nanan-janaka 5 taona moa ilay ramatoa vao niaraka izy ireo. Voakasi-tanana ilay vehivavy ka nandositra nivoaka ny trano sady niantso vonjy. Navelany tao ilay zanany ka io no niharan’ny hatezeran’ilay lehilahy. Noho ny vono nahazo ilay zaza dia sy tana ny ainy. Henon’ny fokonolana ilay antso vonjin’ilay vehivavy ka tamy ny fokonona ary nirifatra nandositra ilay nahavanon-doza. Vao naheno ny antso ny polisy ao Itaosy dia nidina teny an-toerana avy hatrany. Nifanenjehan’ny olona ka tratran’ireto fokonolona teny an-tanimbary. Efa saika tratran’ny fitsaram-bahoaka ity lehilahy ity raha tsy tonga haingana ny polisy nisambotra azy. Nohadihadiana teny anivon’ny polisy misahana ny heloka bevava ny tenany ary nalaina am-bavany, omaly.